Ultimaker Cura 4.10 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Ultimaker Cura 4.10 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Fotoana vitsy lasa izay dia niresaka momba ny Ultimaker Cura izahay izay programa izay manome interface interface mba hanomanana modely ho an'ny fanontana 3D ary avy amin'ny maodely, ny programa dia mamaritra ny toerana hanaovana ny mpanonta 3D miaraka amin'ny fampiharana milahatra tsirairay avy sosona.
ankehitriny, Faly aho mizara aminareo ny vaovao momba ilay fampiharana andro vitsy lasa izay nahazo vaovao vaovao farany tonga amin'ity kinova vaovao ity "Ultimaker Cura 4.10" ary nanovana fanovana isan-karazany sy fanatsarana, izay ny zava-baovao mahaliana indrindra dia ny plug-in import an'ny teratany ho an'ny CAD.
Raha tsy fantatrao ny momba an'i Ultimaker Cura, avelao aho hiteny aminao izany dia fampiharana natao ho an'ny mpanonta 3D, izay ahafahanao manova ny masontsivana fanonta ary avy eo manova azy ireo ho kaody G. Noforonin'i David Braan, izay rehefa afaka kelikely dia hiasa amin'ny Ultimaker, orinasa natokana ho an'ny famolavolana sy fanamboarana mpanonta 3D.
Fanafody Ultimaker Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanomezana sehatra misy sary hanomanana modely amin'ny fanontana 3D, IZA Izy io dia ahitsy araka ny maodely ary ny programa dia mamaritra ny scenario amin'ny mpanonta 3D mandritra ny fampiharana milahatra isaky ny sosona.
1 Vaovao lehibe ao amin'ny Ultimaker Cura 4.10
2 Ahoana ny fametrahana Ultimaker Cura amin'ny Linux?
Vaovao lehibe ao amin'ny Ultimaker Cura 4.10
Ao amin'ny kinova vaovao nampiana maoderina topi-maso izay mampihatra ny sary an-tsaina ny fizotran'ny fitaovana, ary koa ny script "FilamentChange" izay nametrahana parameter iray hamaritana ny halaliny (toerana Z) ary nanampy ny fahaizana mampiasa ny fikirakirana Marlin M600.
Misongadina ihany koa amin'ity kinova vaovao ity a plugin ho an'ny fanafarana mivantana avy amin'ny CAD, izay ny endrika manohana dia STEP, IGES, DXF / DWG, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, SiemensNX, Siemens Parasolid, Solid Edge, Dassault Spatial, Solidworks, 3D ACIS Modeler, Creo, ary Rhinocerous, Zava-dehibe ny milaza izany Amin'izao fotoana izao dia ny plugin ihany no misy an'ny Windows ary alefa any amin'ireo mpamandron'ny Ultimaker Professional sy Ultimaker.
Farany, Momba ny fanamboarana bibikely ireto manaraka ireto dia voalaza:
Namboarina bibikely izay miato amin'ny haavony dia mampiato ny fitrandrahana rehetra raha toa ka fampiasa extrusion no ampiasaina.
Ny olan'ny fanamarinana dia raikitra rehefa miditra amin'ny kaonty UM.
Raikitra ny famafana ny z mandrindra ao amin'ny fitaovana mifindra mankany amin'ny sandan'ny 0.
Ireo rafitra hita maso ihany no amboarina ny elanelan'ny fetra.
Nanamboatra bug izay hianjeran'i Cura rehefa manamboatra modely amin'ny Linux.
Namboarina bibikely rehefa mampiasa tarehimarika fiteny miankavanana miankavia apetraka amin'ny lahatsoratra amin'ny fanontana printy.
Nanamboatra bug izay misy anarana sasany misy tarehintsoratra Unicode hanakana an'i Cura rehefa manandrana manome alalana.
Namboarina bibikely izay misy maodely ampahany eo ambanin'ny takelaka fananganana raha ny maodely voafantina ao afovoany no ampiasaina.
Nanamboatra bug izay hiseho ny zana-tsipìka amin'ny rantsan-tànana rehefa nitazona ny bokotra "Manage Printer".
Raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana Ultimaker Cura amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana te-hametraka ity rindranasa ity amin'ny rafitr'izy ireo dia afaka manao izany amin'ny fanarahana ny torolalana zarainay etsy ambany.
Amin'ny ankapobeny ho an'ny Linux, ny mpamorona ny Cura manolora anay rakitra AppImage izay azontsika atao amin'ny tranokala ofisialin'ny fampiharana. Ny rohy dia ity.
Na ho an'ireo izay maniry hampiasa ilay terminal dia afaka mahazo ilay fonosana izy ireo amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity:
Aorian'ny fisintomana ny fonosana hanome alalana famonoana ho anao izahay. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana faharoa amin'ny fonosana ary amin'ny menio manodidina dia mandeha amin'ny safidin'ny trano isika. Ao amin'ny varavarankely nisokatra, mametraka ny tenantsika eo amin'ny kiheba fahazoan-dàlana na amin'ilay faritra "fahazoan-dàlana" izahay (miovaova kely eo anelanelan'ny tontolon'ny birao izany) ary hikitika ny boaty "fanatanterahana" izahay.
Na avy amin'ny terminal dia azontsika atao ny manome alalana amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Ary voila, ankehitriny isika dia afaka mihazakazaka ny installer amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny rakitra na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny baiko:
Farany, amin'ny tranga Arch Linux na derivatives, Azontsika atao ny mametraka ny rindranasa mivantana avy amin'ny repositories Arch Linux (na dia efa taloha kokoa aza ilay kinova). Mba hanaovana izany dia mila manoratra fotsiny isika:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ultimaker Cura 4.10 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Audacium, ilay fork an'ny Audacity tsy misy telemetry
WhyNotWin11: App hanamarinana raha mety amin'ny Windows 11 ny PC-nay